Canary Islands Scenery chikamu 1 uye 2
mubvunzo Canary Islands Scenery chikamu 1 uye 2
1 gore 9 ago #547 by janroth
Ini paIndaneti uye yakatoiswa Canary Islands Scenery part1 uye 2. Kuororwa pandakatanga achibhururuka pamwe FSX Steam Edition pa La Palma (GCLA) yakanga kukuru. Very zvakanaka nzvimbo dzokuona !!
Ndakaedza zvakawanda dzendege uye ini vakasangana zvimwe zvinetso ndinoda kugadzirisa nokubatsirwa wako. Musi runway pakati Tenerife South (GCTS) sokuti pane kuva dambudziko kukwira kana kunetsana pakati girl uye runway, nokuti dzimwe runway makomo mifananidzo inokukurudzira uye zvinoita sokuti adzikatidza runway ?? Pandakaona tekisi kuburikidza mugomo navamwe runway rinowanika nomwoyo mhando zvinhu pamusoro payo ?? Pandinonyatsotarira airport kubva mumhepo, zvose zvinoita kuti kukuvara. Zvinosuruvarisa chete dambudziko zvinonyatsoitika airport Los rodeos they and (GCXO). Mumwe kwokusafunga okupedzisira: ari runways musi Gran Canaria (GCLP) tarisa zvinhu zvikuru. Hapana runway nhamba uye hapana mavanga chena kuruboshwe uye rworudyi runway. The runway iri sezvinoita mutsetse dema. Izvi shoma zvikuru pane chikuru flightsim runway anotarira.
Ndinovimba tsananguro yangu hwakajeka uye ndinovimbawo kunzwa mamwe mazano kugadzirisa nyaya idzi.
1 gore 9 ago #550 by janroth
The nezvinetso yendege GCTS uye GCXO vave kugadziriswa vachimhanya ORBX Vector Configuration chishandiso kushandisa kureva waipedza Airport Elevation Corrections kuti GCTS uye GCXO. The chete dambudziko yasara ndiyo nezvokuzadziswa runways airport GCLP. Ndinotarisira mazano ako nokuda ichi.
1 gore 9 ago #551 by janroth
Problem kugadziriswa kugadzwa zviri zvandakaona kuna Gran Canaria Airport (GCLP) kubva Rikooo. Mugumisiro anotarira kukuru !! Ndatenda.
Time chokusika peji: 0.110 mumasekonzi